The Social Network – Mark Zuckerberg | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » The Social Network – Mark Zuckerberg
Posted by Kaung Kin Pyar on Nov 18, 2015 in Entertainment, Movies/TV | 14 comments
လူတွေရဲ့ အိပ်ချိန်တွေကို ခွစီး..
အိပ်ရေးမ၀တဲ့ မနက်ခင်းတွေနဲ့ သူ နိုးထ စေခဲ့တာ
ကမ္ဘာကြီးကို ထိုင်ရာကမထ ပတ်ကြည့်ချင်ကြတာနဲ့ပဲ
ဘေးနားက လူတွေအချင်းချင်းတောင် ဝေးကွာ..
တချို့က သတင်းတွေယူဖို့အတွက်.. သုံး..
၃ပုံ ၂ပုံလောက်က ကောလဟာလ
Photowonder တွေ, Beauty Plus ကြားမှာ
တချို့က စိတ်ဖေါက်ခွဲဖို့နေရာလို သဘောထားကြ..
သူကိုယ်တိုင် မျက်နှာဖုံးတွေ တမျိုးပြီးတမျိုး ပြောင်းတပ်ရင်း
ကမ္ဘာကြီးကို ခြုံ ကြည့်..
ဘယ်သူမှ ငါနဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့
ဒါက ဟိုးတစ်လောတုန်းက Facebook သုံးပြီးလို့ Bill စစ်ပြီးချိန် အဲ့ဒီ အလွန်ချစ်စရာကောင်းသလို အလွန်လဲမုန်းစရာကောင်းလှပါတဲ့ ဖွဘုတ်တော်ကြီးကို မျက်စောင်းလှမ်းထိုးထားတာ…( ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်မမြင်တာကတော့ ထုံးစံပဲ. )။
တကယ် ပြောချင်တာက ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားအကြောင်းပါ…။ ဒီဇာတ်ကားကို စသိတာက..ဆရာသမားတစ်ယောက်နဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ အလုပ်ခွင် Stress တွေအကြောင်း၊ Work Done တွေ၊ Positive Working Environment အကြောင်း လေထိုင်ပွားရင်းက စ တာ..။ နောက်တော့ Facebook Company အကြောင်းရောက်သွားရော…။ အဲ.. အဲ့ဒီအကြောင်းရိုက်ထားပါတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကို အဲ့ဒီက စ သိခဲ့တယ်…။
Facebook ရဲ့ ကနဦးက ဘယ်လိုလဲ?? ဇူကာဘက်ကြီးတစ်ယောက် Facebook ကနေ ဘယ်လိုဝင်ငွေတွေရှာနေပါလဲ ????
ဟားဗတ်စ်တက္ကသိုလ်က ဇူကာဘက်ဆိုတဲ့ ချာတိတ်ကောင်လေးတစ်ယောက် အသဲကွဲရာက အခု လူငယ်တွေ တစ်နေ့တစ်နေ့သူ့မျက်နှာမှ မမြင်ရရင် မနေနိုင်ပါဘူးလောက်ထိ ဖြစ်သွားစေမယ့် Facebook ဆိုတဲ့အရာ စ ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့…။ ဒီချာတိတ်ကောင်လေး ဘယ်လောက်လက်စောင်းထက်ပြီး ဟားဗတ်စ်ဆာဗာကို ဘယ်လိုဝင်မွှေခဲ့လဲ…။
ဒီဇာတ်ကားကို စသိကတည်းက ဒီ The Social Network ကို ရှာခဲ့ပေမယ့်.. ဒေါင်းလို့ရမယ့်Link မရနိုင်ခဲ့..။ မနေ့ကမှ မွှေရင်း နှောက်ရင်း ဒေါင်းလို့ရခဲ့တယ်…
အမှန်တော့ ဒီလင့်ခ်က အကြည်မဟုတ် စာတမ်းထိုးလဲ မပါဘူး….။
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ လင့်ခ်အကြည်လေးများ ရွာသူားတွေတွေ့ခဲ့ရင် ဒီမှာ Sharing လုပ်ပေးပါဦးလို့ အကူအညီတောင်းဗျဇီ…
ဟိုက်ရှ်… ဘာတွေဖြစ်သွားတယ်မသိဘူး…။ Link တွေအများကြီးပေါ်ပြီး.. အောက်က ဆက်ရေးထားတဲ့စာတွေတော့ ပျောက်သွားတယ်…
ဟားးးး ရသွားပြီ မမချွိ.. ကျေးဇူးးးပါပဲ…
အမှန်တော့ ဒီလင့်ခ်က အကြည်မဟုတ် စာတမ်းထိုးလဲ မပါဘူး….။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ လင့်ခ်အကြည်လေးများ ရွာသူားတွေတွေ့ခဲ့ရင် ဒီမှာ Sharing လုပ်ပေးပါဦးလို့ အကူအညီတောင်းဗျဇီ…
အိုက်ဒါ အောက်ပိုင်း က စာ
အရင်ဆုံးရှာဖြစ်တာ CM ထဲက မချွိ..။ ရုံးကဆာဗာကပဲ အဆင်မပြေတာလားမသိဘူး..။ တခြား PCloud Link တွေရပေမယ့် zip file ကို ပတ်တနာရှာနေတယ်…။ အပြင်ကဒေါင်းကြည့်ဦးမယ် မချွိ..
ခေါင်းစဉ်ပြင်ပေးတာရော… Link များတာတွေဖြုတ်ပေးတာရော.. စာသားထပ်ဖြည့်ပေးတာရော..Link ပေးတာရော.. ကျေးဇူးပါ..မချွိရေ..
FBက ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကျယ်ကြီးကျယ် သူဟာ ကောင်းကင်ပြာရဲ့အောက်မှာ။
ဇူဇကာဘက်ကြီးဘယ်လောက်စားစား ကောင်းကင်ပြာတို့ ကတော့အသာလေး လာထား…..
အဲ… ဒါကတော့ နည်းနည်းများသွားပြီ… ဟီးးဟီးးး.
တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲ…။ မုန့်မကျွေးချင်တာလား၊ လက်ဆောင်မပါတာလား…..
အခု ကလေးအဖေဖြစ်ခါနီး နေပြီ။
ဘာလေးမွေးပြီး ဘယ်လိုကြီးပျင်းလာပြီး ဘာကို ဝါသနာပါမလဲ သိချင်မိပါ့။ :-))
မြန်မာပြည် ရဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲထဲ မယ် Facebook ရဲ့ စွမ်းအားကလဲ မသေးလှဘူး။
ကျေးဇူးတင်ရမဲ့ အထဲ သူလဲပါတယ်။
ကင်းကောင်ကို ခြစ်ခြင်တယ်… ဆားဖို့
သို့သော် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ကိုစွန့်ခွာကြသူများဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖူးတယ်
We’ll share more details in the coming months once we settle into our new family rhythm and return from
our maternity and paternity leaves. We understand you’ll have many questions about why and how we’re doing this.
Mom and Dad ပေါ့…